Professional Marketing Management - King Construction Group
Professional Civil Engineering Course
Specialist Certificate In Interior And Exterior Design
Specialist Certificate In Decoration Technology And Design Concept
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုအောင်မြင်မှုရရှိ်လိုသူများ Company များတွင် Marketing စီမံခန့်ခွဲမှုကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်လုိုသူများ Company များတွင် Marketing Manager/sales လုပ်လိုသူများ Management Level တွင်လက်ရှိလုပ်နေသူများနှင့် Management Level သို့တက်ရောက်လိုသူများ
သင်တန်း Course များမှာ Basic Marketing Knowledge ( အခြေခံ Marketing စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ )
21st Century Marketing Plan & Strategies ( ခေတ်သစ် Marketing သဘောတရားနှင့်နည်းဗျူဟာများ )
Creating Successful long term growth with consumer communication ဖောက်သည်များအား ကြာရှည်ခိုင်မာစွာထိန်းသိမ်းနိုင်မည့် ဖောက်သည်များနှင့် ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာများ
Market Segmentation ( ဈေးကွက်၏အရေးပါသောအခြေခံအစိတ်အပိုင်းများ )
E-Commence နှင့် Social Marketing ( ပြည်သူ့အခြေပြုဈေးကွက် ရှာဖွေခြင်းနှင့် Online business ဆိုင်ရာနည်းနာများ )
အားသင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး Marketing နယ်ပယ်မှ သူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်လုပ်ကိုင်လိုသူများ၊ တစ်နို်င်တစ်ပိုင်အိမ်တွင်းမှုစီးပွားရေးကိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူများ အားလုံးတက်ရောက်သင့်သောသင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါသင်တန်း Course အတွင်းလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အောင်မြင်မှုရရှိနေသော ၀ါရင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ MBA ဘွဲ့ရရှိထားပြီးသော နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိဆရာ/မများ မှ သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
No 311 tower B , Junction 8 Myaing hay won condo , 8 mile kyite win pagoda road , Myangone Township, Yangon, Myanmar.
Hotlines :09-509-5512, 09-254-999-809,095505877
E-mail : info@king.com.mm
Building (B), 107-A ( Dailia ) Road Between 61 street and 62 street, Mandalay Township, Myanmar.
King Company Profile
Copyright © 2019. All rights reserved by King Construction Group.